Mune dzimwe Forex Pivot Point chakarurama - Forex zviratidzi Download
musha MT4 zviratidzi Mune dzimwe Forex Pivot Point chakarurama
Mune dzimwe Forex Pivot Point chakarurama
Somunhu muzvinashawo, Waona kuti pane zvipfigiso kana makenduru. Izvi zvinonzi Pin zvipfigiso kana kuneta makenduru. Vanogona kuva bearish kana bullish Pin mbariro.
The bullish Pin Bar ane muswe magumo unonongedzera pasi. Zvinoratidza pane mutengo sezvaaimboita kuti kuda kuitika. Kana ukaisa museve pa ndiye muswe rakatarisana muviri, museve ichanongedza kutungamirirwa kudzorwa; izvo hazvisi kumusoro. Izvi kenduru bullish chaizvoizvo zvinoratidza kuti kumusika ari kuramba mitengo mberi nechezasi kana pamwero rutsigiro. Naizvozvo kana zvakadaro kenduru aumbwa mutengo vanogona kumuka.
The bearish Pin mazariro vane zvavo muswe magumo hunotaura kwira. Kana ukaisa museve pa ndiye muswe rakatarisana muviri, museve ichanongedza kutungamirirwa kudzorwa; izvo hazvisi downwards. Izvi kenduru bullish chinoratidza kuti kumusika ari kuramba mberi yepamusoro mitengo kana pamwero kurwisa. Somunhu muzvinashawo kana kenduru kwakadaro (kuneta) nezvimiro zvino vakagadzirira mitengo achatungamirira downwards.
Sezvo muzvinashawo unofanira kuvavarira kuguma mbambo nomuzariro uye kuzarura basa nenzira kuti mbambo bhaa pfungwa (izvi nokuisa museve kumuswe kumagumo kuvatungamirira muviri).
Zvisinei pashure nokuvhura woiisa panonetsa kuziva sei kure kuti afanotaura muitiro vachaenda. Pamunopinda basa uri kukanganiswa purofiti sezvo kutsanya sezvinobvira. Saka unofanira kuva nechokwadi kana kuvhura basa uye kana kuvhara kutengeserana.
Zvichienderana pamusoro drawback, unofanira chokubatanidza Pin mbariro nechiidzo kuti 100% mugumisiro. The zvikuru yokuita chakarurama kushandisa ndiyo fxi_pivot pfungwa chinoratidza.
paakati Izvi zvinoratidza zuva neyakaoma uye ichava nenguva yakanaka. It anoisa mutsetse at yepasisa mitengo rimwe zuva uye mutsetse uyu anonzi rutsigiro pamwero. Rinorambidzawo imwe mumutsetse ichava nenguva yakanaka rimwe zuva izvo nezvavo savakuru resistances.
Rinewo imwe mutsetse pakati pazvitsigiso resistances iyo inoratidza musika mutengo pamwero panguva iyo zuva anovhara pa.
Fig.2. fxi pivot pfungwa chakarurama pamusoro chati.
Uchishandisa fxi pivot pfungwa paakati nembambo namazariro
In ino zvokutengeserana maitiro muchitsvaka mbambo mbariro kuti vanoumba iri resistances kana zvitsigiso. Ipapo uvhure basa pakuguma mbambo nomuzariro kana kuneta kenduru.
Iva nechokwadi kuti vanoisa vanorega kurasikirwa pakupera mbambo bhaa muswe. Izvi zvichaita nechokwadi kuti imi muri wakachengeteka kana mumusika misikanzwa nokuda zvimwe zvinhu zvakafanana nhau kana kumanikidzwa vatengesi.
Zvino isa yenyu utore mubereko panguva padyo yapfuura 3rd zuva rutsigiro kana nemishonga pamwero kana munhu bullish bhaa kana nemishonga kana rutsigiro pamwero kana munhu bearish bhaa. Utange rimwe iro mbambo bhaa akaumba pamusoro.
Zano iri vachakupai 95% uye pamusoro inodzoka.
Fig.3. Kusanganisa mbambo nembariro uye fxi pivot pfungwa chakarurama.
From maumbirwo 3 nechepamusoro, somunhu muzvinashawo muri kuvhura imwe Utenge kuti rava kuvharwa wechipiri mbambo pakapuranga sezvo kuratidzwa kutora kwako mubereko sezviri kuratidzwa. Unoziva kuti kana iwe azarura hurongwa pakuguma wokutanga mbambo nomuzariro uye akaisa wako vanorega kurasikirwa pakupera muswe waizongotarisana kutora mari yako. Zvitema nhamba inoratidza count rechitatu yapfuura zuva rutsigiro. Open Demo nhoroondo yokuedza chakarurama ichi.
Mune dzimwe Forex Pivot Point paakati the Metatrader 4 (MT4) paakati uye musimboti wacho Forex chinoratidza ndiko zvokuchinja vaunganidza nhoroondo date.
Fxi Pivot Point Forex chokukomborerwa inopa mukana kuona peculiarities siyana uye mapatani mu mutengo emuchina izvo usingaonekwi chinoabatsira.
How yokugadza Fxi Pivot Point Forex Indicator.mq4?
Mune dzimwe Download Forex Pivot Point Indicator.mq4
Copy Fxi Pivot Point Forex Indicator.mq4 yenyu Metatrader Directory / nyanzvi / zviratidzi /
Right watinya musi Fxi Pivot Point Forex Indicator.mq4
Chakarurama Fxi Pivot Point Forex Indicator.mq4 rinowanika Chart yako
How kubvisa Fxi Pivot Point Forex Indicator.mq4 kubva Metatrader yako 4 chati?
Previous nyayaDeltaForce Forex chakarurama
inoteveraCamarilla Forex chakarurama